July 2, 2019 - CeleLove
July 2, 2019 Cele Love 0
ဆရာမင်းသုခ ရဲ့ ဇူလိုင်လ အတွက် တစ်လစာဟောကိန်း ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like&Shareပေးကြပါအုံး …… 2019နှစ်အတွက်မိမိကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းကို ဆရာမင်းသုခထံဖုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီးလိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ ကံဇာတာအညံ့များလည်းပပြောက်ပြီးကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အဆင်ပြေကြပါစေ …။ ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာဆရာမင်းသုခ ၊၇၃လမ်း/၃၄-၃၅လမ်းကြား၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် မန္တလေးမြို့ ….Ph-09440243656 #တနင်္ဂနွေသမီးများ […]
အမြန်လမ်းပေါ်မှာ အများပြည်သူများ သတိထားဆင်ခြင်နိုင်စေဖို့ ဒီ VIDEO ဖိုင်ကိုမျှဝေလိုက်ပါသည် ခင်ဗျာ…
အမြန်လမ်းပေါ်မှာ အများပြည်သူများ သတိထားဆင်ခြင်နိုင်စေဖို့ ဒီ VIDEO ဖိုင်ကိုမျှဝေလိုက်ပါသည် ခင်ဗျာ… အမြန်လမ်းမပေါ်မှာ ပိုက်ဆံကြဲချတဲ့ ကားတစ်စီးကြောင့် အန္တရာယ်နဲ့ လက်တစ်ကမ်းလေးပဲလို တော့တယ် …။ စေတနာပါတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ပေမယ့် အန္တရာယ်များလို့ သတိနဲ့ ဆင်ချင်စေချင်ပါသည်။ အမြန်​လမ်း​မှာ လမ်းမ​ပေါ် ပိုက်ဆံကြဲချခဲ့တဲ့ ကားတစ်​စီးရဲ့ လုပ်ရပ်လေးကြောင့် အန္တရာယ်နဲ့ […]
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ပါတ်သတ်ပီး ရဲတွေကိုပွဲကြမ်းလိုက်တဲ့ လင်းလင်း Victoria လေးရဲ့ အမှုဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ အမှုမှန်ပေါ်အောင် လှုပ်ရှားလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့ အမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Social ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေကြတဲ့သူအချို့နဲ့အတူ ပြည်သူများ၊ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်များကလည်း ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှန်လေး အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာအောင် ဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးနေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် နော် …. အဆိုပါအမှုကို CID မှလွှဲပြောင်းရယူထားပြီး […]
“ပင်စင်ယူတဲ့အချိန်နဲ့ သေတဲ့အချိန်ထိ အတူတူနေဖို့အတွက် အိမ်အကြီးကြီးကို စုဝယ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်း ၇ ယောက်” တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းက တရုတ်အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်း ၇ ယောက်ဟာ သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အသက်ကြီးလို့ပင်စင်ယူတဲ့အချိန်ကနေ သေတဲ့အချိန်ထိ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူစုနေနိုင်ဖို့အတွက် အိမ်အကြီးကြီးတစ်လုံးကို စုပေါင်းပြီးဝယ်ယူဖြစ်ခဲ့ကြပါ တယ် …။ အစကတော့ဟာသအနေနဲ့ ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ […]
Wisdom Hill အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စီအိုင်ဒီ ကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ သက္ကမိုးညို Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုအတွက် မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ စီအိုင်ဒီက နေ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနကို ဖြေကြားခဲ့တဲ့ အဖြေတွေ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒီလို ဖတ်ရတဲ့ နေရာမှာ ဘ၀င်မကျစရာ […]
မိကျောင်းတွေစားလို့ကျန်တဲ့ သမီးလေးရဲ့ခေါင်းကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး ရှိက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေတဲ့မိခင် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင် အင်မတန်ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် …။ ဒီဖြစ်ရပ်လေးကတော့ နှစ်နှစ်အရွယ်သမီးလေးဟာ မီကျောင်းတွေမွေးမြူထားတဲ့ တွင်းထဲ ကျပြီး အရှင်လတ်လတ် မိကျောင်းစားတာ ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာဆိုရင်လည်း သမီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မိကျောင်းကန်ထဲကို ခုန်ဆင်းပြီး သမီးလေးကို ကယ်တင်ဖို့ကျိုးစားခဲ့ပါသေးတယ် […]
၉ နှစ်​အရွယ်​ က​လေးတစ်​ဦးကို လိမ်​လည်​​ခေါ်​ဆောင်​သွားပြန်​တဲ့ သက်​ငယ်​မုဒိမ်းဖြစ်​စဉ်​ မ​နေ့က ဇူလိုင်​လ ၁ ရက်​​နေ့မှာ အမရပူရ၊ ​ရွှေကြက်​ယက်​တိုက်​နယ်​၊ စံ​ရွေးရပ်​က အသက်​ ၉ နှစ်​အရွယ်​ သမီး​ငယ်​​လေးတစ်​ဦးကို ​အောင်​​အောင်​ဆိုသူ အရွယ်​​ရောက်​အမျိုးသားတစ်​ဦးက အ​မေ​ခေါ်ခိုင်းတယ်​လို့​​ပြောဆိုပြီး ​ …. ကျောင်းဆင်းချိန်​ ​နေ့လည်​ ၃ နာရီဝန်းကျင်​ခန့်​မှာ […]
ရွှေပေါက္ကံ က အသက် ၁ နှစ် ၈ လ သမီးလေး GARCE ရဲ့ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရမှု မျက်ရည်များနဲ့ရေးတဲ့စာ မျက်ရည်များနဲ့ရေးတဲ့စာ ဒီနေ့ ကလေးလေးအိမ် တို့ admin team ကညီအစ်မတတွေ သွားကြတယ်။ ကလေးလေးနဲ့ ကလေးလေးမေမေကိုအားပေးဖို့ရယ် ကလေးလေးအတွက် အထောက်အကူရဖို့ တုနှိုင်းမဲ့ရတနာလေးတို့ရဲ့ […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ အမှုမှာ ဆရာမနှင်းနုလွင်ကို LIVE လွှင့်ပီး ပွဲကြမ်းခဲ့တဲ့ အမ…ပိုးဖြူရဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် အစ်​မ.ပိုးဖြူ​ပြောတာ..​စကားနား​ထောင်​တာနဲ့ပင်​..အဲ့ဆရာမဆိုတဲ့…နှင်းနုကို….သတ်​ချင်​လိုက်​တာ.. ဒေါသတွေလဲထွက်လိုက်တာ တနုံ့နုံ့နဲ့ ဘယ်လိုဆရာမလဲမသိဖူးနော်…သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာလိုက်တာ ….. အဓိက..တရားခံ..နှင်းနုဆိုတဲ့…​ကောင်​မ..😡😠😡တာဝန်​..​ပေါ့တာ..အဲ့ဆရာမနှင်းနုဆိုတဲ့ဆရာမကို..က​လေးဖြစ်​သလို..ဖြစ်​ရင်​..သူ့မိဘ​တွေ…ခုလိုမျိုး..​သွေး​အေးနိုင်​ပါ့မလား.. အမပိုးဖြူ ပြောထားတာတွေကတော့…”တရားခံလိုလို..တရားခံလို့ ယူဆရတဲ့ကောင်လေး ဖမ်းထားတယ်..အမှုကလဲဖွင့်ထားတယ် …. အမှုဖွင့်ထားတဲ့စခန်းကလဲ အမှတ်(၁) ရဲစခန်း။ ဖမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အမကမေးလိုက်တယ်။ […]
Earphone ကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ၅ ခု
Earphone ကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ၅ ခု လူတစ်ယောက်စာ နားထဲထည့်ပြီး နားထောင်နိုင်ဖို့အတွက် လူတော်တော်များများအသုံးပြုကြတဲ့ အသံချဲ့စက် အသေးလေးတွေလို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ Earphones(နားကြပ်) ကတော့ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို အသံအဖြစ်ပြောင်းပြီး နားထဲကို ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Earphones တွေကိုတော့ ear speakers, headphones စသဖြင့်လည်း […]